Elisa Kit, Elisa Test, Elisa sahy miteny, anzima Immunosassay - Donglin Sci & Tech
Isika indrindra indrindra dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana ny anzima immunoassay fizahana aretina reagents, laboratoara teknika fampandrosoana sy ny asa ary koa ny fampandrosoana ny rindrambaiko solosaina.
Manasa anao amim-pitiavana izahay mba hiaraka aminay ary isika no vonona ny hitandrina maharitra fiaraha-miasa aminareo. Mpandraharaha sy OEM rehetra no nandray.
Hery ny kongonina
Ny orinasa dia manana sampana 3: Shanghai, Beijing sy Kanada orinasa sy ny HQ in Wuxi. Manana sampan-draharahan'ny varotra, vokatra sampan-draharaha, ny fikarohana sy ny fampandrosoana departemanta, sampan-draharaha ara-teknika sy ny fitaovana.
Wuxi Donglin Tech Development Sci & Co., Ltd., Dia mpanamboatra sy ny mpamatsy ny biolojika reagents ho amin'ny fiainana ny siansa, ny foibeny ao amin'ny faritra afa-Taihu Toerana mahafinaritra Lake.
Naorina tamin'ny 1997, ny orinasa toy ny raharaham-barotra nanomboka OEM mpanome tolotra ny Elisa fitaovana manerana izao tontolo izao.
Tamin'ny 2013, dia nanomboka ny marika manokana DLdevelop. Tsy misahana ny mpanamboatra fitaovana Elisa ka zarao ho any Azia, Oseania, Afrika, Eoropa ary Amerika. Ny fanitarana ny raharaham-barotra, dia nanorina sampana ivelany any Kanada, ny iray an-toerana any Shanghai.
Human nisy an'ireo Type MMTV Integration Site Famil ...
Voalavo Activin A (ACVA) Elisa Kit
Human sampahom-fahasamihafana 40 Ligand (CD4 ...
Voalavo Transglutaminase 2, sela (TGM2) Elisa Kit
Wuxi Donglin Tech Development Sci & Co., Ltd.